Qubanaha » WAR-BIXIN: Q.M oo shaacisay Tirada Dadka Shacabka ah ay dileyn Ciidanka DF & Amisom…
WAR-BIXIN: Q.M oo shaacisay Tirada Dadka Shacabka ah ay dileyn Ciidanka DF & Amisom…
Jan 18, 2017 - jawaab
Warbixin uu Xoghaayaha Guud ee QM u gudbiyey Golaha Ammaanka ee QM ayaa lagu sheegay inay Ciiddanka Dowladda Somalia iyo kuwa Hawlgalka AMISOM dileen 92-qof oo rayid ah afartii bilood ee ugu dambaysay sannadkii 2016-kii.
Warbixinta oo ka koobnayd 20-bog waxaa lagu xusay inay Ciiddanka Boliska iyo kuwa Milliteriga ee DF mas’uul ka yihiin dilka 55 qof oo rayid ahaa, halka 37-kalena ku baxeen gacanta Askarta AMISOM.
Xoghaayaha Guud ee QM waxa uu Warbixintiisa ku sheegay inay Ergadda QM u joogta Somalia sii wadaan inay AMISOM ku xiriiriyaan eedeymaha sheegayo inay geystaan Tacadiyo ka dhan ah Xuquuqda Aadanaha iyo Sharciga Aadminimadda.
Warbixinta waxaa lagu xusay inay Alshabaab ku dhaqaaqday weeraro loo adeegsaday gaadiid miineysan, si ay dareen cabsi leh oo amni-xumo leh u abuuraan muddada ay socdaan Doorashooyinka., waa sida lagu xusay Warbixinta uu Xoghaayaha Guud ee QM u gudbiyey Golaha Ammaanka ee QM.
Warbixinta waxaa kaloo lagu muujiyey in ay Amni-xumida kaalin ka qaadatay dib-u-dhaca Mushaaraadka Ciiddanka Dowladda oo aan in ka badan 12 bilood wax mushaaraad ah la siinin, waa sida hadalka loo dhigay.
Warbixinta waxaa lagu soo gunaanaday inay Mushaaraadka ay Deeq bixiyayaasha bixiyeen si caadi ah loo siiyo Ciiddanka Milliteriga, Boliska Federalka iyo 1,000 Saraakiisha Bolis-gobaleedka ku sugan magaallooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, balse lama shaacinin kharajka lagu bixiyo Mushaaraadkaasi.